DAAWO: Muxuu Uhuru Kenyatta usheegay Ciidamadii uu ku booqday Dhoobley, Sidee ayayna Saxaafada Kenya uga hadashay Booqashadii laga qariyay DFS? | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
DAAWO: Muxuu Uhuru Kenyatta usheegay Ciidamadii uu ku booqday Dhoobley, Sidee ayayna Saxaafada Kenya uga hadashay Booqashadii laga qariyay DFS?
Saxaafada dalka Kenya ayaa si weyn maanta uga hadlaysa booqashadii madaxweynahooda uu ku tagay magaaladda Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Booqashada Uhuru Kenyatta oo aheyd mid laga qariyay dowlada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa uu kusoo arkay ciidamada Kenya uga sugan Jubbada Hoose gaar ahaan Dhoobley.
Wargeyska Nation ee kasoo baxa Nairobi ayaa saaka bogiisa hore kusoo daabacay war uu ciwaan uga dhigay “Uhuru Kenyatta oo maalin lasoo qaatay ciidamada KDF-ta ka jooga Soomaaliya”
Isagoo la hadlayay ciidamadii uu booqday ayuu Uhuru Kenyatta yiri “Waxaad halkan Soomaaliya usii joogtaan si aad ubad baadisaan nolol badan, waana wax ay Kenyanka ay waligood hilmaami dooni, waxa aad halkan ujoogtaan ayaa ah in ugu yaraan aad dadka ka dulqaadaan cabsida AlShabaab.
RIIX HALKAN: DAAWO MUUQAALKA UHURU OO BOOQANAYA DHOOBLEY
“Waxaa soo noolaaday waaxdeenii dalxiiska, waad ku mahadsan tihiin sida aad usugteen amaanka dalkeena.” ayuu hadalkiisa ku daray madaxweynaha Kenya.
“Waxaan la hadalnay dowlada cusub ee Soomaaliya si ay xooga usaaraan iney muhiim utahay iney dhistaan militerigooda, markaas kadib gudaha dalka ayaad kusoo laaban doontaan, taasna waa qorshaheena ka bixitaanka,” Uhuru ayaa sidaas yiri.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu madaxweynaha Kenya yiri “Si aan udifaacano dhulkeena hooyo, oo aan ufulino waajibaadkeena dhanka dibada ee amaanka iyo nabad galyada waxaan uluminay qaar kamid ah wiilasheena, kuwaas naga dhintay waxaa ay na xasuusinayaan qatarta nagu dhacday
TV-yada waa weyn ee Kenya sida NTV, Citizen, KTN iyo kuwa kale ayaa si weyn ubaahiyay muuqaalka madaxweynaha Kenya ee tagay magaaladda Dhoobey.
Si kastaba, madaxtooyadda Soomaaliya ayaa aad uga carootay in madaxweynaha Kenya uu kusoo xad gudbay qaranimada Soomaaliya maadaama isagoo aan dowlada soo wargelin uu soo galay Soomaaliya, halka maamulka Jubbaland ay si indho la’aan ah ubeeniyeen in Uhuru uu yimid Dhoobley.